Famerenana amin'ny laoniny Marsh any Louisiana taorian'ny BP Spill Notarihin'i Ellicott Dredges
Aprily 30, 2015
Ny Lake Lake Hermitage Marsh - Tetikasa famerenana tany am-boalohany NRDA dia misy ny fananganana tohodrano ao anatin'ny dian-tsambo iray fantatra amin'ny anarana hoe: "Lake Hermitage Marsh Creation Project" novolavolaina sy novatsian'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fandaharam-pandrindrana, ny fiarovana sy ny famerenana amin'ny laoniny (CWPPRA). Ity tetikasa ity dia manolo ny manodidina ny kianja 104 hektara noforonina ho an'ny kianjan'ny tanimbary 5-6 izay mety ho namboarina tao anatin'ny faritry ny tetikasa CWPPRA.
Ny Lake Hermitage Marsh Famoronana - Tetikasa famerenana tany am-boalohany NRDA dia hamorona manodidina ny kianjan'ny tanimbary 104 hekena ho maridrefy tsipika an-tsaha 7,300 izay apetraka ao anatin'ny famolavolana farany ny tetik'asa CWPPRA. Ity faritra marsh fanampiny ity dia hamboarina tanteraka ao anatin'ny faritry ny faritry ny tetikasa CWPPRA. Ny sediment dia ho voageja avy amin'ny faritra hisambotra amin'ny renirano Mississippi, ary avy ao anaty fantsom-pifandraisana hamorona tohodrano vaovao amin'ny faritry ny tetikasa. Rehefa mandeha ny fotoana, ny oram-boajanahary sy ny fanakisanana ny filentena maloto dia tokony hiteraka fiakarana ao anaty elanelan'ny intertidal izay mety ho fananganana tohodrano mipoitra. Ny faritra feno 104-acre dia hovolena miaraka amin'ny zavamaniry teratany terena mba hanaingana ny tombontsoa azo avy amin'ity tetikasa ity.
Ny Lake Hermitage Marsh Creation - Tetikasa famerenana am-boalohany NRDA dia misy ao anatin'ny Basaria Hydrologic Basin any Plaquemines Parish, Louisiana, ao andrefan'ny vondron'olona ao Pointe a la Hache, ary avaratra andrefan'ny vondron'ny Magnolia. Io basika io dia nosokajiana ho laharam-pahamehana amin'ny famerenana ny morontsiraka, ary izy io no anton'ny fandalinana lehibe sy ny famolavolana tetikasa ary ny fanatanterahana.